Mitambo, 04 Kukadzi 2019
Muvhuro 4 Kukadzi 2019
Tuku Anonzi Akashaya Onyora Nganonyorwa yeHupenyu Hwake: Sahwira Wake Oronga Kuipedzisa
Muimbi, nyanduri uye munyori wemabhuku Chirikure Chirikure uyo akashanda kwenguva yakareba namuchakabvu Oliver Tuku Mtukudzi anoti paakazova vange vave kunyora nganonyorwa yehupenhyu hwake.
New England Patriots Yosimudza Mukombe weSuper Bowl muAmerica
Nhasi muAmerica matambwa mutambo mukuru weSuper Bowl mumakwi eamerican Football pakati pe Los Angeles Rams nenew England Patriots. Mutambo uyu watambirwa kunhandare yemercedes-Benz kuatlant Georgia.
FC Platinum Yokweshana neHoroya yekuGuinea neMugovera
Chikwata cheF.C. Platinum chinofanira kutora mapoinzi ese matatu apo chiri kutamba neHoroya yekuGuinea mangwana kunyange zvikaoma seyi.
Varairidzi veNhabvu Vachena Misoro Vari paBasa Vorerutsirwa paMutemo weGwaro reCAF 'A'
Mutungamiri weZimbabwe Football Association, VaFelton Kamambo, vanoti varairidzi vakaita saJoey Antipas weChicken Inn, Cosmos Zulu weNgezi Platinum Stars nemurairidzi wemaWarriors, Sunday Chidzambwa, havasi kubatwa nechisungo ichi kunyange hazvo vasina zvitupa zveCAF ‘A’ izvi.
Vakawanda Vofadzwa neKupiwa Ruremekedzo rweGamba reNyika Kwakaitwa Mtukudzi neHurumende
Vanhu vakawanda munyika zvikuru vaimbi nevanoita zvemitambo vanoti vari kufara zvikuru kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe muhurumende vakapa muimbi Oliver Mtukudzi ruremekedzo rekuva gamba renyika.
Mutungamiri weMDC, VaChamisa, Vanobatana nevana veZimbabwe Mukuchema Oliver Mtukudzi
VaChamisa vanoti kunyangwe hurumende yeZimbabwe ikasapa Mtukudzi chiremera chegamba renyika, vakawanda munyika vanomuona segamba nekuda kwemabasa aakabata mukuimba kwake pamwe nekuchengetedza tsika nemagariro.
Muimbi Akashanda naMtukudzi kweNguva Ndefu, Mary Bell, Oshushikana neKushaya kwaTuku
Mary Bell, uyo akashanda naMtukudzi kubva kuma1990, anoti ari kuramba achitarisa pamadandemutande akaita seFaceBook, Twitter, pamwe neWhatsApp aine tarisiro yekuti zvimwe achaonawo kana vhidhiyo zvayo Tuku, sekuzivikanwa kwainyanyoitwa Mtukudzi, achiramba kuti ashaya.
Muimbi ane mukurumbira pasi rese, Oliver Tuku Mtukudzi, ashaya neChitatu masikati muHarare mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga.
Misoro yenhau dzanhasi, Muvhuro 14 Ndira, 2019